शून्य समयका नियुक्ति सदर कि बदर ? – Kanika Khabar
Kanika Khabar १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:३० February 25, 2021 मा प्रकाशित
संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ ।
२१ माघमा भएको शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक तस्बिर । फाइल फोटो : रासस
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सुनुवाइविना भएका नियुक्ति खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलाको आशय भएको बताए । ‘सर्वाेच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेको छ । जब कि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् । त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए,’ उनले भने, ‘दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आफैँमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त फैसला गर्नेछ ।’
शून्य समयका नियुक्ति स्वतः बदर भए
फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब गर्न पाउँछ । कुनै पनि कामको म्याद गुज्रिएको छैन भन्ने हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाउँदैनन् ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संसद्ले विशेष कानुनमार्फत विगतका विवादास्पद नियुक्तिहरू बदर गर्न सक्ने बताए । ‘सर्वोच्चले ५ पुसदेखि प्रतिनिधिसभा जीवित छ भनेको हो । यद्यपि, संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा फैसलामा केही बोलिएको छैन । यसबारे कि सर्वाेच्चबाटै फैसला हुुनप¥यो, कि संसद्ले विशेष कानुन बनाएर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउनुप¥यो,’ उनले भने ।
फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिलाई असर गर्दैन
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल
सर्वोच्चको फैसलामा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विषयमा केही बोलिएको छैन, त्यसैले फैसलाले नियुक्तिलाई कुनै असर गर्दैन । सुनुवाइका लागि संसद्लाई ४५ दिनको समय हुन्छ, सो समय पूरा भइसकेको छ, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको छ, त्यो संवैधानिक छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका ३८ जनामध्ये दुईजनाले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए भने अन्य चारजनाले शपथ बहिष्कार गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरूमा किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अम्मर मिश्रले शपथ लिएका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा समितिको अध्यक्षमा सूर्य सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । यही हप्ता मात्र सरकारले गोरखापत्र संस्थान तथा प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ ।
पुनर्स्थापित संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– संसद्लाई सुनुवाइ गर्न नदिएर गरिएका नियुक्ति स्वतः बदर हुन्छन्
संसद् विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र शपथ भयो । संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । अब के हुन्छ ?
सर्वाेच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेको छ । जब कि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् । त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए । दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आपैmँमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त पैmसला गर्नेछ ।
नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ समितिले केही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ?
फाइल सभामुखले फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । अहिले सचिवालयमा त्यो फाइल छैन । अदालतले हेरिरहेको अवस्थामा सुनुवाइ समितिले त के भन्न सक्छ र ! अहिले नै सुनुवाइको अवस्था मैले देखेको छैन । जेहोस् नियुक्तिले मान्यता गुमाएको छ । संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्न पाएन । सुनुवाइ समितिबाट निर्णय आएन भनेर नियुक्त गरिएको छ । हामीले संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्न सक्थ्यौँ । त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । त्यो अवरुद्ध समयलाई सर्वोच्चले शून्य समय भनेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन भनेर सभामुखले लेखेर पठाउनुभयो, तर त्यसले किन कुनै प्रभाव पारेन ?
नियुक्ति त स्वतः गलत छ । अध्यादेश नै गलत छ । ऐन बनाएर हामीले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौँ । अहिले संविधान संशोधन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि त पठाइयो, तर तत्कालै संसद् भंग गरियो । यहाँ त बद्नियत देखियो । सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था नै भएन । सम्पूर्ण कुरा खोलेर सभामुखले फाइल पठाउनुभएको छ । तर, पनि नियुक्ति भयो । यो गैरसंवैधानिक काम हो । गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज हुन्छ । त्यसमा अदालत पनि स्पष्ट छ ।नयाँपत्रिकाबाट